परराष्ट्रमन्त्रीलाई खुला चिठी
सञ्जीव पोखरेल शुक्रबार, जेठ २, २०७७, २३:२८
यो खूला चिठी लेख्ने मेरो उद्देश्य विदेश रहेका नेपालीहरूप्रति तपाईंको सरकारले अहिले देखाएको अमानवीय र गैरजिम्मेवार व्यवहार हो। यो व्यहारसँग जोडिएको नेपाली नागरिकताको परिभाषाको हो । नेपालीहरूले राज्यका बारेमा अब भविष्यमा गर्ने सम्मानको हो।
नेपालसँग स्रोत छैन, सरकारले आफ्नो पैसा खर्च गरेर ल्याउन सक्दैन, सबैलाई थाहा छ। तर, आफ्नै पैसा खर्च गरेर नेपालको भूमिमा आउने अधिकारबाट नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गर्ने बहुलठ्ठी निर्णय तपाईंहरूले किन गर्नुभयो? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ विदेशमा फसेका लाखौँ नेपालीले मागिरहेका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रामक छ। मानिसहरूको स्थानान्तरण र हिँडडुलबाट उत्पन्न हुने जोखिम ठूला छन्। यो सबैलाई थाहा छ। तर, के यो जोखिम नागरिकलाई आफ्नो देश टेक्न नदिने यथेष्ठ बहाना हुनसक्छ? सरकारले विदेशबाट आउने नागरिकहरूका लागि क्वारेन्टिनको प्रबन्ध गर्न सक्दैन? यसका लागि विभिन्न तहका सरकार, सरकारी निकाय, समुदाय, संघसंस्था परिचालिन गर्ने सम्भावना थिएन?
नेपाल आज संसारमा सम्भवतः एकमात्र देश हो‚ जसले महाव्याधीको भूमरीमा विदेशमा फसेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने कुरामा समन्वय गर्ने त परै छोडौं, देशमा पाइला टेक्न नदिने निर्णय गरेको छ। यो यस्तो निर्णय हो‚ जसका कारण विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आफू नेपाली भएकोमा लज्जाको अनुभव गर्न परिरहेको छ।
संसारका अन्य मुलुकले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काएका छन्। कतिले नेपालका जहाज भाडामा लिएर आफ्ना नागरिक फिर्ता लगेका छन्। नेपाली जहाज यही कामका लागि अस्ट्रेलियादेखि जापानसम्म पुगेका छन्। तर, नेपाल सरकारले ती जहाज स्वदेश फर्किंदा नेपालीलाई पाइला राख्न नदिन उर्दी जारी गरेको छ। योभन्दा ठूलो लज्जा र अमानवीयता अरू के हुनसक्ला?
नागरिकलाई राज्यविहीन बनाएर देशका सिमाना रक्षा गर्नुको के अर्थ हुन्छ?
संकटको घडीमा नागरिकहरूप्रति तपाईंको सरकारले देखाएको अपमान र अमानवीय व्यवहारको हिसाब नेपालीहरूले पक्कै राख्लान्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले गरेको गल्तीका लागि निर्वाचनमा मतदाताले निर्णय गर्ने कुरा आशा गर्ने हो।
अन्त्यमा, यी प्रशस्त प्रश्नहरूपछि एउटा थप प्रश्न गर्ने अनुमति दिनुहोस्- नेपाल कसको? तपाईं नेताहरूको मात्र? कि नेपाली नागरिकता वा राहदानी बोक्ने समस्त नागरिक र तिनका सन्तानको?
सञ्जीव पोखरेलको ब्लगबाट